Puntland oo shirkada Hamza Foundation u ogolaatay in ay ka kalluumaysto xeebaha gobolka (Maqal) – Radio Daljir
Oktoobar 28, 2013 5:51 b 0
Boosaso, October 28, 2013 – Wasaarada kalluumaysiga ee dowladda ?Puntland ayaa maanta heshiis balaaran la gashay shirkad kuwa kalluumaysiga ah oo laga leeyahay dalka Thailand.
Shirkadda oo lagu magcaabo Hamza Foundation iyo Puntland ayaa heshiiska ay galeen waxaa uu noqonayaa mid kalluumaysi iyo weliba wax is dhaafsi.
Puntland waxay shirkadda si rasmi ah ugu ogolaatay in ay ka kalluumaysato xeebaha gobolka, iyadoo sidoo kale shirkadu bilaabi doonta in ay dalka keento badeeco qiimo jaban iyo ay xaruumo ka furato gudaha dalka.
Docda kale wasaaradda kaluumaysiga ee Puntland waxaa ay dhaleecayn u jeedisay doonyo kuwa Jiriifka ah oo ku sugan xeebaha Puntland, kuwaas oo weliba doonyo kalluumaysi ku bur buriyey xeebaha degmada Xaafuun ee gobolka Bari.
Dhegeyso: wasiir ku xigeenka Kalluumaysiga Muuse Geele Faroole oo daljir uga waramay heshiiska